Umthandazo womntu ogula kakhulu Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ufuna enye ukuthandazela umntu ogula kakhuluNokuba lilungu losapho okanye umntu omthandayo, ungakhathazeki, uze endaweni elungileyo, kule posi siza kukubonisa imithandazo eyahlukeneyo onokuyicengceleza kwaba bantu bagulayo, ucele uThixo ukuba enze ukuthanda kwabo.
Thixo, ingqibelelo yakho iya kwenziwa.
1 Kutheni le nto kufuneka kuthandazwe umntu ogula kakhulu?
1.1 Umthandazo womntu ogula kakhulu
1.2 Ukuthandazela umntu ogulela ukufa
2 Imithandazo eya kwabangcwele abagula kakhulu
2.1 Umthandazo kuMoya oyiNgcwele kaYesu weMpilo
2.2 Umthandazo kwi-Saint Peregrine yomntu ogulayo
2.3 Umthandazo kuSanta Pantaleon womntu ogulayo
2.4 Ukuthandazela uMoya oyiNgcwele kumntu ogulayo
Kutheni le nto kufuneka kuthandazwe umntu ogula kakhulu?
Amaxesha amaninzi siye simfanyekiswe ziintlungu nokubandezeleka esinako xa sibona isalamane okanye umntu esimthandayo egula kakhulu kwaye silibale ukuba ayisiyiyo le nto siyifunayo, yeyokuba lo mntu ubalulekileyo achache, koko yintando kaThixo. Nokuba singamkhumbula kangakanani lo mntu, uThixo sele eyikhethile indlela yakhe, nokuba kukumnika impilo okanye ukuvukela ebukumkanini bamazulu ukuze aphumle ecaleni kweNkosi, kufuneka siqonde ukuba oku kukuthanda koMdali Nokuba kubuhlungu, kufuneka siyamkele kwaye sifunde a ukuthandazela umntu ogula kakhulu.
Nanini na xa umthandazo ufundwa ngokholo olunyanisekileyo, uThixo uyasiphendula. Kubaluleke kakhulu ukuhlala unxibelelana neNkosi, kuba oku kubaluleke kakhulu kubomi babantu, nokuba kunzima kwaye kubuhlungu, kubandakanya neemeko apho umntu esimthandayo egula kakhulu. eNkosini kwaye ushiye yonke into ezandleni zakhe.
Xa sifumanisa ukuba umhlobo, isalamane okanye umntu esimaziyo ugula kakhulu okanye wenzakele, into yokuqala esiyenzayo kukulinganisa ukuba achache ngokukhawuleza, kodwa singacela iNkosi ukuba imnike loo mntu impilo, nokuba asazi siphumo soko. Umntu, kufuneka sibeke yonke into ezandleni zeNkosi, ngubani owaziyo ukuba enze ntoni.
Kuxhomekeke kwimeko yesigulana, ubudlelwane bethu kunye naye kunye nokuzinikela kwethu kwisanta ethile, sinokwenza imithandazo emininzi eyahlukeneyo yokucela ukuba achache ngokukhawuleza. Emva koko siza kukubonisa ifayile ye- imithandazo yabantu abagula kakhulu uninzi lucengcelezwe namhlanje.
'Yesu, Nkosi Enenceba! Wena uyinduduzo nosindiso lwabo bonke abantu abathembele kuwe ngokupheleleyo, namhlanje simi phambi kwakho ukuba sikubongoze ngenxa yenkanuko yakho ebuhlungu, unike umkhonzi wakho (igama lomntu ogulayo) impilo, ukuba iluncedo kuye Sinokudumisa kunye nathi kwaye sibonge igama lakho elingcwele. Ukuba kuyintando yakho ukubiza lo mphefumlo ukuba uphumle ecaleni kwakho, unike amandla kumzuzu wokugqibela kule nqwelo-moya yasemhlabeni, uyinike ukufa okuzolileyo kwaye uyikhokelele kubomi obungunaphakade. Amen. ''
Kubalulekile ukuba ekupheleni kwalo mthandazo uBawo Wethu Osezulwini, Yibonge uMariya kunye noGloria.
Ukuthandazela umntu ogulela ukufa
Kwimeko apho umntu enesifo esinganyangekiyo, kuya kufuneka abhenele komnye umthandazo, owenzelwe ngokukodwa imeko yabagulayo besentlungwini.
'' Nkosi yam, Thixo wam, wena unenceba enkulu kwaye uyamhlonela. Wena ukhusela yonke imiphefumlo ehamba kwimeko engathandekiyo. Namhlanje ndimi phambi kwakho ukuba ndiphakamisele imithandazo yam ezulwini, ukuze uthethelele (igama lomntu), ukuze amkhulule kwintlungu nakukubandezeleka okukhoyo namhlanje. Khusela loo mphefumlo ukuba ngala maxesha ufuna inceba yakho, uyikhulule kwiiyure ezibulalayo kwaye loo mbewu yezempilo inokuphinda izalwe ngaphakathi kuyo. Nceda uve imithandazo yam kwaye ngamana inceba yakho nobubele bunokumlamlela lo mntu ugulayo, ukuze bamlamkele ukuze achache kwangoko. Amen. ''
Nkosi, ungasilahli, usikhathalele kwaye usikhusele ngoku nakwilixa lokufa kwethu. Amen.
Imithandazo eya kwabangcwele abagula kakhulu
Umthandazo kuMoya oyiNgcwele kaYesu weMpilo
'' Nkosi yam, Thixo wam, wena owathi ngokucacileyo: "Ndim uvuko nobomi", wena ungumphilisi waso nasiphi na isifo nakweliphi inxeba; Silapha ukuzokucela ukuba intliziyo yakho enamandla ibe yeyokunceda abo banesifo namhlanje, sikwacela nokuthethelela iNtombikazi enguMariya, ukuze iphilise kwaye ithobe iintlungu ezibangelwa zizigulo ayenazo. .. (Igama lomntu ogulayo). Namhlanje siphakamisa le mithandazo kuwe ethembele ekufudumaleni kwentliziyo yakho kunye nenceba yakhe enkulu, ukuba angabahoyi abo basweleyo. Mayibongwe intliziyo yakho, uYesu Krestu uMsindisi. Amen. ''
Umthandazo kwi-Saint Peregrine yomntu ogulayo
"IMagnifico San Peregrino, enkosi ngemimangaliso yakho, unikwe igama" laMandla aMandla ", nditsho" uMsebenzi oMangalisayo. " Wena, mkhulu, ofumene imimangaliso yamandla onke, kwabo bantu bachaphazelekayo abaye bakucela ukuba ubancede. Kwiminyaka emininzi ubukhe waphathwa ngumhlaza, sisifo esiphazamisa ubukho bethu. Uzinikele ngokupheleleyo eNkosini, xa inzululwazi yoluntu ingasenanto yokwenza. Usikelelwe nguThixo, ukuba usabele abathobekileyo ukuphilisa. Ngoku ndicela uThixo ngawe ukuba abaphilise bonke aba bantu ndibabeke ezandleni zakho. (Igama labagulayo). Bangenelele phambi kweNkosi ukuze baphiliswe ngokukhawuleza, Amen. ''
Umthandazo kuSanta Pantaleon womntu ogulayo
`` Wena ngcwele, owahlala kwaye wabandezeleka ngenxa yokungekho sikweni kwabantu kwaye uyazi ngokupheleleyo indlela emangalisayo yesifo kwaye ukufa. Nceda abagulayo nabasweleyo. Philisa izilonda zabo, uphilise amanxeba abo ukuze impilo ibuyele kubo kwaye ungaze ubalahle. Amen "
Ukuthandazela uMoya oyiNgcwele kumntu ogulayo
'' Owu Moya oyiNgcwele! infinito amandla okuphilisa unganika ithuba kubo bonke abantu abaphakamisa umthandazo egameni lakho, xa befumana ubunzima bokungonwabi ngokomoya. Namhlanje ndicela ngentobeko enkulu ukuba uncede (Igama lomntu ogulayo) athobe iintlungu nokubandezeleka kwakhe, umnike amandla. Menze ukuba ahlale ethwele uthando lweNkosi yethu kwaye angalahli ukholo kuMoya oyiNgcwele, okanye nethemba lokuphiliswa kwakhe. Amen ''
Unokuba nomdla: IChaplet yeNceba kaThixo igqityiwe